ညီလင်းသစ်: မမြင်ရသော ဆေးဝါးများ
Posted by ညီလင်းသစ် au 29.6.14
ကျန်းမာရေးဆုိုတဲ့ ရှုဒေါင့်တွေ၊ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးမှု၊ ပြည်သူတွေအတွက် ကျန်းမာသန့်ရှင်းတဲ့လူနေမှု ဂေဟစနစ်၊ သဘာဝအရင်းအမြစ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး......အများကြီး ကျကျန်နေခဲ့ပြီ
တဘက်မှာ နောက်ထပ်ရောဂါ အသစ်ဆန်းတခုကို
ရောဂါတွေလည်းဒီလောက်အမျိုး အမည် မများဘူး
နွားနို့မှာကအစ.. နွားကို ပိုးသတ်ဆေးတိုက်တယ်..အဲဆေးက သူ့စီကထုတ်တဲ့
နို့မှာ ပါလာတယ်.. အစိုးရကတခုပြီးတခု လိုက်စစ်တော့ ပေါ်လာတာဆက်တိုက်ဘဲ
အဲဒီကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့နို့သောက်နေကြတာ..နှစ် ကို 20 တောင် မကကြတော့ာဘူး..
ဘာမှကိုမစားရဲ မသောက်ရဲ တဲ့အနေအထားဘဲ
ခက်နေတာက အဲဒီလို အများကြီးနောက်ကျနေတာတောင် အချိန်မီ ပြုပြင်ဖို့၊ အမီလိုက်ဖို့ အခုထက်ထိ မကြိုးစားသေးတာပဲ…၊
Thanks sis. Long time no see, huh! :)
မသိ၊ နားမလည်ခင်တုန်းက လုပ်ထားခဲ့တာတွေက အခုအချိန်မှာ တခုပြီးတခု ပြန်ပေါ်လာတာပါပဲဗျာ…။
ထုတ်ကုန်တွေ ရေရှည်ခံဖို့ သုံးကြတဲ့ chemical တွေက လူတွေကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက်နိုင်တာတွေက ကြောက်ဖွယ်ပါပဲ အစ်ကိုရာ ...
စမ်းသပ်မှုမျိုးစုံနဲ့ ခေတ်ကြီးတိုးတက်လာလေ ကြောက်စရာကောင်းလာလေပဲလို့ မြင်မိတယ် မောင်ညီလင်းရေ ....